Waa maxay sababta Ahlu Sunna Waljamaaca uga hor timid shuruudaha guddiga doorashada Galmudug - Awdinle Online
Waa maxay sababta Ahlu Sunna Waljamaaca uga hor timid shuruudaha guddiga doorashada Galmudug
December 25, 2019 (Awdinle Online) –Madaxda Sare ee Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa si weyn uga horyimid shuruudihii uu xalay soo bandhigay guddiga farsamada maamul u dhisida Galmudug, kuwaas oo la xariiray ka mid noqoshada baarlamaanka.
Ahlu Sunna ayaa Ugu dambeyn waxa ay ugu baaqday dowladda dhexe inay ilaaliso heshiiska labada dhinac, iyada oo tilmaamtay in dhankeeda ay sidiisii u fulisay.
Ilaa iyo hada Dowladda Somaliya ayaan ka hadlin liiska ay soo saareen Ahlusunna kuwaa oo ay kusoo bandhigtay 20 ruux oo ay ugu tala galeen in ay uga mid noqdaan Barlamaanka Galmudug.
Dhuusamareeb haatan waxaa ka socota soo xulista Xildhibaanada Baarlamaanka cusub ee Galmudug.
Previous articleXildhibaanad Ilhaan oo u dabaaldegtay sharci ay ansixintiisa ka hor timid
Next articleCiidamo ka tiran Amisom oo lagu sagootiyay Muqdisho